Yesu Saa Yare Homeda | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
Yesu Saa Yare Homeda
Ná Farisifo no mpɛ Yesu asɛm koraa, enti na wɔrepɛ ɔkwan bi a wɔbɛfa so akyere no. Wɔka kyerɛɛ no sɛ mma ɔnsa obiara yare Homeda. Homeda bi, Yesu huu aberante bi a n’ani afura sɛ ɔresrɛsrɛ ade wɔ abɔnten. Ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: ‘Monhwɛ sɛnea Onyankopɔn nam ne tumi so bɛboa aberante yi.’ Yesu tee ntasu guu fam de fraa dɔte na ɔde sraa aberante no ani so. Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Kɔhohoro wɔ nsu Siloa mu.’ Efi bere a wɔwoo aberante no na onhuu ade da, nanso ɔkɔyɛɛ nea Yesu kae no, enti ohuu ade.
Ɛyɛɛ nkurɔfo nwonwa. Wɔkekaa sɛ: ‘Ɛnyɛ aberante a na ɔte ha srɛsrɛ ade no ni? Anaa ɔsɛ no kɛkɛ?’ Ɛnna aberante no kaa sɛ: ‘Me na yɛwoo me onifuraeni no!’ Ɛnna nkurɔfo no bisaa no sɛ: ‘Ɛyɛɛ dɛn na wuhu ade yi?’ Bere a ɔkaa nea ɛyɛe a ohu ade no, wɔde no kɔmaa Farisifo no.
Aberante no ka kyerɛɛ Farisifo no sɛ: ‘Yesu de dɔte srasraa m’ani so, na ɔka kyerɛɛ me sɛ menkɔhohoro. Mehohoroe, na afei mihu ade.’ Ɛnna Farisifo no kaa sɛ: ‘Sɛ Yesu sa yare Homeda a, ɛnde ne tumi no mfi Onyankopɔn.’ Afoforo nso kaa sɛ: ‘Sɛ ne tumi no mfi Onyankopɔn a anka ɔrentumi nsa yare koraa.’
Farisifo no kɔfrɛɛ aberante no awofo bae, na wobisaa wɔn sɛ: ‘Ɛyɛɛ dɛn na afei deɛ mo ba yi hu ade?’ Ná n’awofo no suro sɛ wɔbɛka nokware, efisɛ na Farisifo no aka sɛ obiara a obegye Yesu adi no, wɔbɛpam no afi asɔrefie hɔ. Enti awofo no kaa sɛ: ‘Yennim nea ɛyɛe a ohu ade. Mummisa ɔno ara.’ Farisifo no bisabisaa aberante no nsɛm bebree. Afei ɔkaa sɛ: ‘Maka nea minim nyinaa akyerɛ mo dedaw. Adɛn na mugu so rebisabisa me nsɛm?’ Ɛnna Farisifo no bo fuwii na wɔpam no fii hɔ.
Yesu kɔhwehwɛɛ aberante no, na bere a ohuu no no, obisaa no sɛ: ‘Wugye Mesia no di?’ Aberante no kaa sɛ: ‘Sɛ mihu no a, megye no adi.’ Ɛnna Yesu kaa sɛ: ‘Mene Mesia no.’ Wunhu sɛ Yesu yɛɛ ade paa? Ɔsaa aberante no yare na ɔsan boaa no ma onyaa gyidi.
“Moredi mfomso, efisɛ munnim Kyerɛwnsɛm anaa Onyankopɔn tumi.”—Mateo 22:29
Nsɛmmisa: Dɛn na Yesu yɛ de boaa aberante a na n’ani afura no? Adɛn nti na na Farisifo no tan Yesu?
Yesu Saa Obi a Wɔwoo No Onifuraefo Yareɛ
Asuafo no bisaa Yesu nea enti wɔwoo ɔbarima no onifuraefo. Ɔyɛɛ bɔne bi anaa? Anaa n’awofo na ɛyɛɛ bɔne? Yesu saa no yareɛ no, nkurɔfo no kekaa nsɛm bi a ɛkyerɛ sɛ na wɔn mu akyɛ.
Farisifo no Yeree Onifuraefo a Yesu Saa no Yareɛ No
Ɔbarima a Yesu saa no yareɛ no kaa asɛm bi a ɛtɔ asom ma ɛhyɛɛ Farisifo no abufuo. Nea na ɔbarima no awofo suro sɛ Farisifo no de bɛyɛ wɔn no, ɛno ara na wɔde yɛɛ ɔbarima no; wɔtuu no fii hyiadan no mu.
‘Ampa, Onyankopɔn Ayɛ No Awurade ne Kristo’ (Ɛfã II)